Haino aman-jerin-dRajoelina : Nokianin’ny ilontsera -
AccueilSongandinaHaino aman-jerin-dRajoelina : Nokianin’ny ilontsera
Haino aman-jerin-dRajoelina : Nokianin’ny ilontsera
Mazava ny tatitry ny ilontsera, na ny mpanara-maso ny asa fanaovan-gazety sy ny tontolon’ ny serasera, fa misy ireo mpanao gazety sy ny kandidà tohanany no nivoy ny resaka volon-koditra. “Nisy tamin’ireo mpilatsaka hofidina sy ny haino aman-jery, ary ny gazety mpanohana azy ireo no nampiasa ny resaka foko sy fiaviana ary saranga sy fihodirana, entina handresen-dahatra mandritra ny fampielezan-kevitra”. Tsaroana tokoa ny resa-be izay notanterahin’ ireo mpanao gazety tao amina fahitalavitra iray, izay niara-dia tamin’ ilay hoe miara-manonja, nahitana an’i Rinah Rakotomanga sy Lalatiana Rakotondrazafy. Tamin’ izany no nampiasain’izy ireo ny resaka volon-koditra sy ny foko, noho ny resaka efa tany aloha izay efa tsy tsaroana intsony, ny resaka fanoharana olona amin’ ny biby. Notsikafonin’ ireo mpanao gazety ireo mihitsy tamin’ izany fa ny mpanaraka ny sasany dia olona fotsy, ary ny kandidà sasany dia mainty sy ambany tanàna. Efa nisy ny resa-be nandeha tamin’ izany, ary maro no mpanakiana, saingy valy boraingina aza no navalin’ ilay mpanao gazety vehivavy iray hoe zakainy ny vava nataony. Matetika tokoa mantsy dia miiba ambany dia ambany ny adihevitra, entina handresena lahatra ny mpifidy, saingy tsy tsaroan’izy ireo fa misy fiantraikany goavana amin’ ny fiarahamonina malagasy izany. Rariny noho izany raha nilaza ny ilontsera, fa adino tanteraka ny etika sy ny deotolojia hoy ny fanambarana. “Ny fanjakazakan’ny politika amin’ny ita sy serasera ary ny firotsahan’ny gazety sy haino aman-jery sasany lalina tamin’ny propagandy dia miteraka savorovoro eo amin’ny mpanara-baovao sy ny fiarahamonina…Nampanginina, na amin’ny fomba ahoana, na ahoana ny etika sy deontolojia nandritra ny fampielezan-kevitra”
Nambaran’ ny ilontsera noho izany fa tsy naharaka ny fanaraha-maso ny fihoaram-pefy teo amin’ ny sehatry ny serasera ny rafitra napetraky ny lalàna, tahaka ny « Cellule de veille ».Tsy nahasakana ny fihoaram-pefy samihafa nataon’ny haino aman-jery sy gazety, mpanao gazety ary mpiserasera sasantsasany ny rafitra manokana, na « Cellule de veille » natao hanara-maso ny ita sy serasera mandritra ny raharaham-pifidianana”. Ankoatra ny resaka foko sy fiaviana dia nirongatra izay tsy izy ihany koa ny tsaho nandritra ny fampielezan-kevitra hoy ny fanambarana, saingy tsy nahefa ny tompon’andraikitra.“Mirongatra ary tsy hay tohaina ny fanelezana tsaho sy lainga ary vaovao tsy marina amin’ny tambajotra sosialy saingy miraviravy tanana na ny « Cellule de veille », na ny Borigady miady amin’ny asa ratsy amin’ny Aterineto na ny rafi-pahefana hafa”. Manoloana ireo tsy fahatomombanana ireo, dia nitondra soso-kevitra ihany koa ny ilontsera. “Fitoniana sy ny fahatongavan-tsaina haingana avy amin’ireo mpisehatra rehetra eo amin’ny tontolon’ny serasera marolafika (mpanao politika, mpanao gazety, mpitantana orinasan-gazety sy haino aman-jery, mpampiasa tambajotra sosialy, olom-pirenena, fiarahamonim-pirenena, mba hahatonga ny ita sy serasera ho tena fitaovana mitondra fandriam-pahalemana, sy mampanjaka ny demokrasia fa tsy ho loharano hipoiran’ny krizy hafa indray”.
Mazava. Mitetika ny hanangon’olona etsy amin’ny kianjaben’i Mahamasina fanindroany indray ry Marc Ravalomanana sy ny antokony, Tiako i Madagasikara na Tim, ny sabotsy 29 jolay izao. Nanao fangatahana teny anivon’ny Prefektioran’ny polisy izy ireo amin’ny ...Tohiny